Wasaaradda arrimaha diinta oo soo saartay jadwalka Ramadaanka-Sawirro | Baydhabo Online
Wasaaradda arrimaha diinta oo soo saartay jadwalka Ramadaanka-Sawirro
Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha diinta, C/qaadir Sheekh Cali Baqdaadi, ayaa sheegay in maadaama ay fooda nagu soo hayso bishii barakaysnayd ee Ramadaan, loo baahan yahay in ummada Soomaaliyeed ee musliminta ah ay u diyaargaroobaan bishaasi khayrka badan, wuxuuna xusay in shaacinta mar uu bilaabanayo soonku ay leedahay Wasaaradda oo kaliya.
Wasiir Bagdaadi, ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay tahay mid door weyn ka qaadanaysa baahinta iyo gaarsiinta dacwada islaamka gaar ahaan xlliyada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Wasiirku waxa uu uga digay dadka caadaysatay inay khilaafaan waqtiyada oo ka hormara ama ka dambeeya inay ka waantoobaan, isagoo xusay in kuwaasi ay khilaafayaan amarada Wasaaradda, wuxuua ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan Wasaaradda iyo culumada ku howlan arrintaasi, wxuuna tilmaamay inay soo saareen saacadaha la afurayo ee ku aadan gobolada dalka.
Wasiirka Warfaafinta,dhaqanka iyo dalxiiska, Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa isna ka hadlay arrintaasi waxa uuna ku dheeraaday in Wasaaradda Warfaafinta ay tahay hanuunin iyo wacyigalin, islamrkaana waxa uu tilmaamay in muddada uu socdo ramadaanku ay sii dayn doonaan barnaamijyo diini ah ku aadan bisha barakaysan ee Ramadaan.
Sawir Qaade: Maxamed Fereysane